Sawir geesle ah oo Microstation ah ka soo qaad Excel - Geofumadas
Ogast, 2014 Downloads, Microstation-Bentley, topografia
Isticmaalidda qaab-dhismeedka, waxaad ku baran kartaa qaabka Microstation, laga bilaabo liistada rikoodhada iyo masaafada ee Excel, ama liiska xuduudaha x, y, z.
1 Xiiso: Liiska Rumbos iyo Meelaha
U maleyno inaan heysano miisaankan xogta ka imanaya goobta:
Tiirarka ugu horeeya waxaad kuleedahay saldhigyo, ka dib masaafada laba meelood jajab tobanle ugu dambayntiina dhal. Waxaan jeclaan lahayn inaan sawiro geesinadan, adoo adeegsanaya Microstation.
Kuwa isticmaalay qalabka AccuDraw waxay fahmi doonaan in uu yahay waalan, ma aha oo kaliya sababtoo ah qalabku wuxuu leeyahay madaadiisu inuu noqdo daaqad daal leh laakiin sidoo kale sababtoo ah waa inaad gashaa mid kasta oo isuduwayaasha ah; si qalad ah shakhsi ahaan, ka tag hal ama ha dib u ceshin amarka wuxuu ku khasbanaan lahaa inuu dib ugu soo galo xogta illaa uu xaqiijiyo waxa nagu khaldan.
Xaaladdan waxaan ku sameyn doonaa iyada oo la adeegsanayo template Excel, kaas oo kuu ogolaanaya inaad geliso xogta sanduuqa, ka dibna dalbashada sawir-garaynta Mishiinada.
Xilliga Masaafada Duulimaadyada
Siddee u shaqeynaya Template:
Marka la eego template ayaa la geliyaa:
Macluumaadka saldhigyada, haddii ay isku xirxiraan, qoraan lambarka koowaad, template waa ka buuxsanyihiin E iyo G.
Meelaha fog ee xariiqda H,
Macluumaadka cinwaanka ama koorsada. Muhiim ma aha in la galiyo astaamaha darajooyin, daqiiqado ama ilbiriqsiyo maadaama qaabka unugyada uu horeyba ugu jiro.
Template waa ikhtiyaarka ah in la doorto inta jeer ee aynu fileyno in la jarayo; xasuusnoow haddii aan isticmaalno laba jajab tobanle, baqshiinku hubaal ma xirnaan doono, sababtoo ah waxay lumin doontaa qiyaasta tobanlaha labaad.
Template-ka ayaa sidoo kale kuu oggolaanaya inaad doorato isku-duwidda barta koowaad, si loo gaaro jaangooyo. Xusuusnow in shaqooyinkan qaabkan sida caadiga ah lagu kiciyo tiyoolajiyada caadiga ah, sidaa darteed ugu yaraan mid ka mid ah dhammaan qodobbada uu leeyahay isuduwaha UTM ee tixraaca.
Badhanka boodhka ayaa la riixay, natiijada Microstation-na waxaan ku yeelanaynaa figrad-gareynta, sida ku cad muuqaalka fiidiyowga.
2 Xogta: Liisanka Iskuduwaha UTM
Template-ka ayaa sidoo kale shaqeynaya haddii waxa aan hayno ay yihiin liis isku-duwayaal ah oo ku yaal foomka Magaca, Bariga, Waqooyiga, Sare u qaadidda. Iyo sidoo kale jadwalka qayb ahaan hoos ka muuqda.
Waxay u shaqeysaa labada kiisba. Soo-noqoshada waa la jeexjeexi doonaa, iyadoo lagu darayo sharraxaadda ama lambarka qoraal ahaan xagal kasta. Waxay u adeegsan doontaa cabbirka qoraalka, midabka, nooca font iyo iswaafajinta loo adeegsanayo Microstation. Markaa haddii aysan annaga noo muuqan, mar kale ayaa la abuuri doonaa.
Template-ka ayaa loo heli karaa in lagu soo dejiyo lacag khidmad ah. Waxaanan leenahay astaan, maxaa yeelay kuwa nolol ka sameeya samaynta cadastral ama muuqaalka muuqaalka 'iguanas' iyagoo adeegsanaya Microstation, waxay badbaadin doonaan shaqo badan.
Aqbali Template with Paypal ama Credit Card.
Post Previous" Hore Furitaanka, calaamadeynta iyo theming file ka mid .shp la Microstation V8i
Post Next Koorasyada cusub ee gvSIG onlineNext »
8 Jawaab ah "Sawir geesle ah ee Microstation ka soo qaad Excel"
Hadaad rabto inaad kudarto saldhigyo badan,
Gali safka aad ubaahantahay, tusaale ahaan geli inta udhaxeysa safka 10 iyo 11
Kadib waxaad koobi ka sameysaa mid ka mid ah sadarka dhameystiran adigoo taabanaya madaxa bidixda ka dibna ku dheji safka aad doorbideyso oo ay ku jiraan safka 10 iyo 11 taasina waxay sababeysaa in qaacidooyinkaas meesha laga baxo isla markaana jaranjarada uu sii socdo.
Haddii aad ka shakido, iyo maadaama aad iibsatay shaxanka waxaad weydiisan kartaa taageero editor@geofumadas.com
Martín Santos Santillán isagu wuxuu leeyahay:
Subax wanaagsan subaxdii mucjisadu igama oggolayn inaan ku daro saldhigyo dheeri ah, ma ii sheegi kartaa sidii aan ugu dari lahaa fadlan, iyo haddii aad ku siin karto tilmaamo faahfaahsan oo dheeraad ah
Maalin wanaagsan waxaan helay shaxankaaga si aan u sameeyo polygonal laakiin ha ii ogolaanin inaan ku daro saf dheeri ah ma ii sheegi kartaa sida loogu daro saldhigyo badan fadlan
Nofeembar, 2015 at
Maya. Sheyga ayaa kaliya la shaqeeya Microstation.
mawduuca ayaa sidoo kale u shaqeeya autocad ama rayid?
Waxaan haystaa khariidad xawaaladeed 6 oo aan rabo in aan soo dejiyo dhibco qaar, laakiin waxaan ku xiraa kombuyuutarkayga oo leh daaqadaha 7 mana aqoonsanaayo
Ii soo dir faylka heerka sare ah, oo aad la socoto xogta aad ku dartay. Si loo caddeeyo sababta aysan kuu shaqeynaynin.
tifaftiraha (at) geofumadas. iyadoo leh
kathya g isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan haystaa template, qora rugta, koorsada, masaafada, iyo isku-duwidda bilowga ee koorsada, ha u dhicin, ha fahmin, x ee.